Al-Shabaab oo Rooble owgiis u ciqaabaysa shacabka Mudug | KEYDMEDIA ENGLISH
Al-Shabaab oo Rooble owgiis u ciqaabaysa shacabka Mudug
Saraakiisha qeybta 21-aad oo ka cudur-daartay, in magacadooda la baahiyo, waxa ay KON, u sheegeen in ay hayaan xogo caddeynaya in Al-Shabaab-ka, dhibaateynaya shacabka Koofurta Mudug, ay heshiis kula jiraan Madaxtooyada Soomaaliya.
GAALKACYO, Soomaaliya – Saraakiil ka tirsan ciidanka Xoogga dalka, gaar ahaa qeybta 21-aad ee fadhigeedu yahay, Galmudug, ayaa Keydmedia Online, u sheegay in Kooxda Al-Shabaab, sare u qaadeen dhibaateynta shacabka Koofurta Gobolka Mudug.
Mid ka mid ah saraakiisha la hadlay, KON, wuxuu sheegay, in Al-Shabaab, billaabeen dhaqan cusub oo ah in ay dhacaan xoolaha, gaar ahaan geela iyo ariga, isla-markaana rartaan raashinka qanacsatada yaryar ku iibiyaan tuulooyinka.
Sidoo kale, waxa ay xoojiyeen gubitaanka degaannada, waxayna labadii Isbuuc ee la soo dhaafay dab qabadsiiyeen dhowr tuulo oo ay ka mid tahay Cadale oo hoos tagta magaalada Bajeela, halkaasoo ay ka qaxeen shacabkii hore u deganaa.
Jidadka ayay miinooyin ku duugeen, si uu u istaago isku socodka degaannada, waxayana ciidankii ugu badnaa geeyeen, Mudug, xilli laga cabsi qabo dullaan ka dhan ah, Wisil, oo gobolkaas ku taalla iyo Baxdo iyo Galgaduud dhacda.
Waxa ay sheegeen, in Fahad iyo Farmaajo, Al-Shabaab, lacag ku siiyeen ciqaabta degaannadaas oo ah halka ay deggan yihiin ehellada Ra’iisul Wasaare Rooble, maadaama uu halkii ugu sarreysay gaaray dagaalka ka dhexeeya Farmaajo iyo Rooble.
“Sida aad ka war qabtid, Al-Shabaab waa Fadlan lacag ku shubo, reer Mudug, waxa ay u dhibaateynayaan in Ra’iisul Wasaaruhu ka soo jeedo, waxayna u shaqeynayaan Fahad iyo Farmaajo”, ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha nala hadlay.
Keydmedia Online, waxa ay xasuusataa in maalmo kadib markii uu fashilmay isku daygii lagu af-duubi lahaa Ra’iisul Wasaaraha 27-kii December 2021, dab la qabadsiiyay ruuqa Saybiyaano ee dagmada Hodan halkaas oo degaan u ah jufada RW Rooble.
Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal ee FEIT iyo Ra’iisul Wasaare Rooble, ayaa xalay liiska xildhibaannada ilaa hadda dooran ka reebay Fahad Yaasiin, kaasoo ku eedeysan kiiska Ikraan Tahliil, lana rumeysan yahay inuu ka danbeeyay dilkii Aamino Cabdullahi.